बैतडीमा कांग्रेस अधिवेशनमा क्षेत्र (ख) को सभापतिमा शिवराज भट्ट प्यानल सहित विजयी !! | सुदुरपश्चिम खबर
बैतडीमा कांग्रेस अधिवेशनमा क्षेत्र (ख) को सभापतिमा शिवराज भट्ट प्यानल सहित विजयी !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ 312
बैतडी– नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत बैतडीमा शनिबार सम्पन्न भएको प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशनको नतिजा आएको छ । बैतडी प्रदेश सभा क्षेत्र (ख) को सभापतिमा शिवराज भट्ट ३४५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी महेशदत्त भट्टले ३०९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै उपसभापतिमा नरेशबहादुर चन्द ३६९ र मोहनबहादुर चन्द ३४९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनीहरुका निकटतम् प्रतिद्वन्दी देवबहादुर चन्दले २७१ र राकेशसिंह बिष्टले २१४ मत प्राप्त गरे ।
यस्तै सचिवमा देवदत्त भट्ट ३७५ र धनबहादुर क्षेत्री ३४७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनीहरुका निकटतम प्रतिद्वन्दी कृष्णबहादुर बोहराले २२८ र प्रेमबहादुर चन्दले २६५ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै सहसचिव पदमा महादेवसिंह धनाडीले ३६५ र महेशसिंह बिष्टले ३७९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनीहरुका निकटतम् प्रतिद्वन्दी रतनसिंह कार्कीले २३६ र रमेश मेहताले २२५ मत ल्याएका मतदान अधिकृत घनश्याम लेखकले बताए ।
बैतडी प्रदेश सभा क्षेत्र (ख) मा जिल्ला सभापतिका उम्मेद्वार चतुरबहादुर चन्दको प्यानलले पदाधिकारीमा विजय हाँसिल गरेको हो । क्षेत्र नं (ख) ६७५ मत खसेको थियो । प्रतिनिधिहरुको भने मतगणना कार्य जारी रहेको लेखकले बताए ।